Rosia : Ireo «tenin’ny taona 2016» (nasiam-panazavàna) · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Yulia Savitskaya Nandika (ru) i Анна Севастьянова, Miriam Palisson, Sylvia Aimée
Voadika ny 09 Janoary 2019 16:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, srpski, Français, English
Tamin'ny faran'ny taona lasa teo, navoakan'ny onjam-peo iray tsy miankina “Dojd” ny “rakibolana iray ho an'ny taona 2016″. Anisan'ireo teny tao anatin'izany ireto, ny sasantsasany dia mifandray amin'ireo zava-baovao manan-danja na ireo fomba koltoraly, ireo hafa miaraka aminà sary namboarina na ireo “hatsikana” ety anaty tambajotra sosialy. Tao anaty lahatsoratra iray, nanazava vitsivitsy tamin'ireny teny ireny ny “RuNet Echo” (lisitra feno ery amin'ny faran'ny lahatsoratra), saingy mipirina any ananona any ny sasantsasany.
Tamin'ny May 2016, navoakan'ny “Novaïa Gazeta” ny lahatsoratra iray , nosoratan'i Galina Moursaliéva momba ireo “andiam-pamono” ao anaty tambajotra sosialy «VKontakte». Araka ny lazain-dRtoa Moursaliéva, ireo onjam-pamonoantena nataon'ny tanora dia vokatry ny hetsik'ireo vondrom-piarahamonina virtoaly sasantsasany fantatra amin'ny endriny mandreraka — indrindra fa ny fampiasàny sarinà trozona, izay manapaka hevitra ny hamono tena satria tsy te-hitombo ho lehibe. Ampangainy ireo mpitantana ireny vondrona ireny ho misintona ny tanora izay efa ao anaty rarintsaina rahateo no sady koa manosika azy ireny hamono tena amin'ny fanakànana an-dry zareo tsy ho ampy torimaso sy amin'ny fanoroana azy ny fomba hamaranany ny androm-piainany. Manoro hevitra ireo ray aman-dreny ihany koa anefa ry zareo mba hanaraka maso akaiky ny hetsika ataon'ny zanany ety anaty tambajotra.
Monetotchka dia iray tamin'ireo fahataitairana tao amin'ny aterineto tao Rosia tany am-piandohan'ny 2016 . Lisa, izay milalao ao ambadiky ny solonanarana Monetotchka, dia mpianatra tao amin'ny lisea Ekaterinenbourg. Antsa fanaony ireo hira madinika feno ny fanahin'ny filatroana, ny kolontsain'ny tranonkala, ny politika ary ireo nàmany ao an-tsekoly. Tato ny iray amin'ireo lahatsariny momba ny fiainana “an-tambajotra” ho an'ny ankizivavy rosiàna iray mpianatry ny lisea, saingy tapaka ny rohy:
Ireo fifangaroana roa tsy hay vakiana ireo dia nanana ny ora namirapiràtany nanomboka tamin'ny nahitan‘i Alexeï Navalny azy ireo tany anaty rejisitry ny Rosreestr (Sampandraharaha federaly ao amin'ny firenena misahana ny fandraketana, ny kadasitra ary ny fanaovana sarintany). Voamarik'i Navalny fa lasa LSDUZ sy IFYaU9 ny anaran'ireo tomponà hotely raitra tsy miankina sasantsasany, izay tany aloha dia an'ny zanakalahin'ilay lehiben'ny fampanoavana Iouri Tchaïka . Ny tanjona, hoy izy, dia hanafenana ireo torohay tsiambaratelo momba an'i Artiom sy Igor Tchaïka. Nampahatsiahivin'i Navalny ihany koa ho an'ireo mpamaky azy fa nanjavona to anatin'ilay rejisitra Rosreetr ny torohay momba ireo fanànana an'ny fianakavian'ireo olom-panjakana mitàna toerana ambony .
Rusiano (Русиано), Viper (Вейпер) ary «tsy msy vola [ho anareo], famahereza» (Денег нет, но вы держитесь) [angl]
Manana Anarana Mahatsikaiky Ny SArim-Biby Famantarana Ny Mondialy 2018 Ao Rosia Ary Tsy Azonao Akory Aza Izany (Забивака) [Malagasy]
Manana Fahavalo Matanjaka Ilay Tsy Mpino An'Andriamanitra Nilalao Pokemon-Go Tany Am-piangonana Tao Rosia [Malagasy]
#TsyMatahotraAhoNyHilazaIzany (#ЯНеБоюсьСказать) [Malagasy]
Tafiditra Anaty Tantara Ratsy Saro-bahàna Ireo Mpiandraikitra Ny Zon'ny Ankizy Ao Rosia? (Как поплавали?) [Malagasy]
Réseaux de neurones (Нейросети) [ Malagasy]
En louboutins (На лабутенах) [frantsay]
Télégonie (Milaza izy fa mahatadidy zavatra ny selan'ny tranonjaza) (Телегония) [Malagasy]
Nandika (ru) i Анна Севастьянова